थाइराइडका रोगीले भूलेर पनि नखानुहोस् यी ५ कुरा, नत्र शरीरमा होला यस्तो चिजको कमी ! – Sandesh Press
थाइराइडका रोगीले भूलेर पनि नखानुहोस् यी ५ कुरा, नत्र शरीरमा होला यस्तो चिजको कमी !
October 8, 2021 375
काठमाडौँ । थाइराइड एक प्रकारको हर्मोन हो। हाम्रो थाइराइड ग्रन्थीले शरिरबाट आयोडिन लिएर यसलाई बनाउँछ।यो हार्मोन हाम्रो मेटाबोलिजमलाई कायम राखिराख्नका लागि आवश्यक हुन्छ। जब यो ग्रन्थीले कुनै कारणवश धेरै हर्मोन बनाउन थाल्छ, त्यतिबेला थाइराइड बढ्ने गर्दछ।
थाइराइड बढ्दा विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्छ। महिलाहरुमा यो रोग बढि देखिन्छ। यो रोग लागेपछि छटपटी हुनु, राम्रोसँग निन्द्रा नलाग्नु, महिनावारी गडबडी, मुटुको धड्कन बढ्नुजस्ता समस्या देखापर्न थाल्छ।
यसको तत्काल उपचार आवश्यक छ। समयमा नै उपचार गरी यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। यसका साथै, यो रोग लागेपछि के खाने के नखाने भन्ने कुराको पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आज हामी तपाईंलाई थाइराइड रोगी कस्ता खानेकुरा खानुहुँदैन भन्ने बारे जानकारी दिन्छौं।
हुन त क्याफिनले थाइराइडलाई प्रत्यक्ष रुपमा बढाउँदैन तर यसले ती समस्यालाई बढाउँछ जुन थाइराइडका कारण उब्जिएको छ। उदाहरणको लागि छटपटी र अनिन्द्रा। यसकारण तपाईं क्याफेनयुक्त– कफी, चकलेटलगायतका खानेकुराबाट टाढा बस्दा नै राम्रो।
थाइराइड ग्रन्थीले हाम्रो शरिरबाट आयोडिन लिएर थाइराइड हर्मोनलाई पैदा गर्ने गर्दछ। त्यसकारण यो रोग लागेकाहरुले धेरै आयोडिन भएको खानेकुरा खानु हुँदैन। समुन्द्रि खाना र आयोडिन भएको नुन नखानुहोस्।
थाइराइडका बिरामी मद्यपानबाट निकै टाढा बस्नुपर्छ। रक्सीजन्य पदार्थले शरिरको ऊर्जाको स्तरलाई प्रभावित गर्ने गर्दछ। यसले थाइराइड रोगीलाई अनिन्द्राले सताउने गर्दछ।
यसका साथै यसले ओस्टियोपोरोसिसको खतरा पनि निम्त्याउँछ। यद्यपी, रक्सीजन्य पदार्थ कसैका लागि पनि राम्रो मानिँदैन। यसका कारण मोटोपना बढ्छ।
बोलीचालीको भाषामा यसलाई डाल्डा घ्यू भनिन्छ। यो घ्यू मिठाईलगायतका विभिन्न पसलमा प्रयोग गरिन्छ। यसले नराम्रो कोलेस्ट्रोललाई नष्ट गरेर खराब कोलेस्ट्रोललाई बढाउँछ।
थाइराइड बढेकाहरुले डाल्ड घ्यूको प्रयोग गरी बनाइएको खानेकुराको सेवन गरे यसले थप समस्या निम्त्याउने गर्दछ।
रातो मासुमा कोलेस्ट्रोल र स्याचुरेटेड फ्याट अत्यधिक हुने गर्दछ। यसले तीब्र रुपमा तौल बढाउने गर्दछ। थाइराइड रोगीले रातो मासु खाँदा शरिर पोल्ने समस्या निम्तिन सक्छ।
रातो मासुको सट्टा तपाईं कुखुराको मासु खान सक्नुहुन्छ। कुखुराको छातीको मासुमा राम्रो प्रोटिन हुन्छ र यसले शरिरमा बोसो बढ्न दिँदैन।
Prevशुक्रबार गर्नुहोस् यी काम, कहिलै हुँदैन् धनको अभाव
Nextपाथिभारा माताको दर्शन गरि असोज २२ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति,कतै तपाईं नि पर्नुभयो कि ?
चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट
पि’ठ्यु’मा ब’च्चाबोकेर चिया बेच्ने भाईरल चिया-वाली सृष्टि तामाङ्गले सु’टु’क्क गरिन् धुमधाम बिबाह……
कठै ! यसरि गरियो भाइरल झाक्रिलाई बिदाइ ,सबैको रुवाबासि ,हार्दिक श्रद्धाञ्जली (हेर्नुस् भिडियो )
थप्पड खाएका लामा भिक्षु फुर्वा तामाङको भनाई जस्ताको त्यस्तै -खासमा यस्तो भएको रहेछ ! (11120)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10983)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10496)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (7776)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (7767)
मुस्ताङका स्‍थानीय भन्छन् : घासामा ठूलो आवाज सुन्यौँ, आगो बलेको देख्यौँ (7503)
जहाज दुर्घटना परि ज्यान गुमाउने एयर होस्टेज किस्मिता थापा हिरोइन भन्दा कम छैन (फोटो सहित) (7188)
जहाज दुर्घटनामा परेकी एयर होस्टेज किश्मी थापाको टिकटक भिडियो भाइरल (भिडियो सहित) (7102)
देशमा पर्यो अर्को बज्रपात : हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, अन्य को अवस्था गम्भीर ! (6363)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (6326)